Salaamanews » Mahiga “Waan ka xunahay amni xumida wali jirta”
Home » Warar Mahiga “Waan ka xunahay amni xumida wali jirta” Print - Daabace: SalaamaNews - Feb 19th, 2013 // Ka Jawaab	Qoraallo La Xiriira
Kooxda Shabaab oo gobollada dalka dhibaato ka geysatayDagaal khasaare geystay oo ka dhacay Shabelaha hoose Ciidamada Iskaashanaya oo dagaal qaraar kadib kooxda Al-shabaab deegaanno ka qabsadayQaraxyo isdaba joog ahaa oo ka dhacay Marka waxaa lala eegtay gudoomiyaha magaaladaRa’isal wasaare Saacid oo ka xumaaday weerarradii ka dhacay Turkiga
Madaxa xafiiska UNPOS Augustine Mahiga ayaa war qoraal ah ku cambaareeyay dilka sheekha, qaraxii ismiidaaminta ahaa ee gaariga loo adeegsaday ee lagu bar-tilmaameedsaday taliye ku xigeenka booliska Puntland Jeneraal Muxiyaddiin Axmed Muuse oo xilligaas ku sugnaa magaalada Gaalkacyo, qaraxii gaariga loo adeegsaday ee ka dhacay maqxi ku taalla xeebta Liido ee magaalada Muqdisho iyo dilkii loo geystay madaxa sirdoonka degmada Shibis.
Mahiga wuxuu tacsi u diray qoysaska dadkii lagu dilay falalkaas argagaxisada ah oo kooxda al-Shabaab ay sheegatay mas’uuliyadda weerarradaas badankood.
Sidoo kale wuxuu caafimaad deg-deg ah u rajeeyay dadkii lagu dhaawacay weerarradaas kala gadisan.
Wuxuu ugu yeeray shacabka Soomaaliyeed inay kala shaqeeyaan madaxdooda sidii kuwa dambiilayaasha ah ee ka dambeeya falalkan foosha xun loo hor geyn lahaa caddaaladda.
Warka qoraalka ah ayuu Mahiga ku sheegay in xafiiska UNPOS uu ka go’an yahay sidii uu dowladda Soomaaliya uga taageeri lahaa adkaynta ammaanka oo ah mudnaanta koowaad ee xukuumadda,” isagoo intaas raaciyay inaaney oggolaan doonin in falalkan fulaynimada ah ay carqaladeeyaan horumarka taariikhiga ah ee la sameeyay tobankii bilood ee la soo dhaafay.
Tags: warar « Qoraalkii HoreKooxda al-Shabaab oo lacago baad ah ka qaadeysa Shirkadaha Isgaarsiinta iyo Xawaaladaha	Qoraalka Xiga »Midowga Culimada Soomaaliyeed oo gaaray go’aamo ka dhan ah kooxda al-Shabaab	Halkan Hoose ku Jawaab